01/23/2018 - 00:40
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် (၁၆-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီတွင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr.Tran Dai Quang အား သမ္မတနန်းတော်သို့ သွားရောက်၍ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မြဲစေရေး၊ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အာဆီယံဒေသတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
01/23/2018 - 00:39
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့်အဖွဲ့သည် မေ ၁၅ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ဗီယက်နမ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း၏ ဂူဗိမာန်ကို သွားရောက်ပန်းခွေချ အလေးပြုကြသည်။
01/23/2018 - 00:38
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Madam Nguyen Thi Kim Ngan ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာခဲ့ရာ ဟိုချီမင်းမြို့သို့ မေလ ၁၀ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိကြသည်။
01/23/2018 - 00:37
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ အာရှ – ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတက်ရန် ဗီယက်နမ်သို့ထွက်ခွာ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.
01/23/2018 - 00:36
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့်အဖွဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ မျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်း ခေါင်းဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ (AIPA) အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ H.E.
01/23/2018 - 00:35
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း အာဆီယံပါလီမန်ခေါင်းဆောင်များ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ခေါင်းဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ဧပြီ ၂၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံပါလီမန်ခေါင်းဆောင်များ၏ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် 30th ASEAN SUMMIT အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်သည့် ASEAN-AIPA Interface သို့တက်ရောက်ရန် (၂၇.၄.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဂျပန်နိုင်ငံ LIBERAL DEMOCRATIC PARTY အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့်အဖွဲ့အား (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈:၃၀ နာရီက ဂျပန်နိုင်ငံ Okura Hotel ၌ Okura Hotel အကြီးအမှူး Mr. Toshihiro၊ ဒုတိယအကြီးအမှူးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအုပ်စုတို့က နံနက်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။